【 ဆောငျးပါး 】 ဘဝကို အနိုငျနဲ့ပိုငျးသှားတဲ့ ကြျောဟိနျး (ဦးကိတ်တိသာရ) | Opinion Leaders
“ဘယျကလာတာလဲ ? - မသိပါဘုရား။ဘယျကိုသှားမှာလဲ ? - မသိပါဘုရား” ဆိုတဲ့ အမေး-အဖွလေေး ၂ ခုဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှအေတှကျ တိုတောငျးတဲ့သတိပေးမှုလေးပါ။လူ့ဘဝကိုရလာကွတယျ။ဒီဘဝကို ဘယျလိုရလာသလဲ။မိဖကမှေးလို့ ရလာတယျလို့ ဖွကွေရုံကလှဲလို့ တိတိကကြမြဖွနေိုငျကွပါဘူး။တနနေ့မှေ့ာ ကြိနျးသေ သရေမယျဆိုတာ ဘဝကိုရလာသူတိုငျးသိကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သပွေီးရငျ ဘယျကိုရောကျသှားမှာလဲ၊ ဘာဆကျဖွဈမလဲ ဘယျသူမှမသိပါ။ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားက ဒကာမတဈယောကျကို ပရိသတျအလယျမှာ ဒီသဘောတရားနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဖျောပွပါ မေးခှနျး ၂ ခု မေးခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဘဝကိုရလာသူမှနျသမြှ ဆငျးရဲ-ခမျြးသာ၊ အရုပျဆိုး-လှပသူ၊ ပညာတတျ-ပညာမဲ့၊ ရာထူးရှိ-ရာထူးမဲ့၊ ဂုဏျရှိ-ဂုဏျမဲ့ ဘယျလိုဘဝမြိုးကိုရထားကွပါစေ၊ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ အလှနျတှယျတာခုံမငျကွတာ ပုထုဇဉျသဘာဝပါ။မှေးလာသူတိုငျး တနသေ့မေယျဆိုတာကို လူတိုငျးသိကွပါတယျ။
ကိုယျ့ရှမှေ့ာပဲ ကိုယျနဲ့ရှယျတူ၊ ကိုယျ့ထကျကွီးသူ၊ ကိုယျ့ထကျငယျသူတှေ သသှေားကွတာကို လူတိုငျးကွုံဖူးကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အံ့ဩဖို့ကောငျးတာက ဒီလိုသခွေငျးတရားကို တှရေ့ခြိနျမှာတောငျ လူအမြားစုမှာ “ဘယျသူဘယျဝါဖွငျ့ သရှောပွီ၊ ငါတော့နရေအုံးမှာပါ မသသေေးပါဘူး” စိတျရှိနတေတျကွပါတယျ။ခြှငျးခကျြအနနေဲ့ ဘဝကိုတှယျတာပမေဲ့ ဘဝဟာ ဆငျးရဲခွငျးနဲ့သာပွညျ့နတောပါကလားလို့ သတိကပျဆငျခွငျနိုငျပွီး သံသရာမလညျခငျြသူ အနညျးအကဉျြးလဲရှိကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အလှနျနညျးပါတယျ။
တကယျတော့ လောကကွီးမှာ နစေ့ဉျ စက်ကနျ့မလပျ လူတှမှေေးလာကွသလို၊ စက်ကနျ့မလပျ လူတှသေနေကွေပါတယျ။ဒီ ဖှား-သေ ယန်တယားကွီး မှနျမှနျလညျပတျနတောကို ရပျတနျ့လို့ရတဲ့နညျးရှိတယျလို့ ညှနျပွတဲ့အဆုံးအမကတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာမှာသာရှိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ တနေ့ သခေါမှသရေော၊ ဘဝမှာနရေသခိုကျ ပြျောရှငျအဆငျပွသေညျဖွဈစေ၊ စိတျညဈဝမျးနညျးဖှယျကောငျးသညျဖွဈစေ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ ပြျောမှကွေ့တာ လူ့သဘာဝပါ။ကွညျ့တတျမယျဆိုရငျ သံသရာ (စဉျဆကျမပွတျ တရစပျဖွဈခွငျး) ဆိုတာ ဘဝတဈခုပွီးတဈခု ဆကျဖွဈနတောကိုမဆှေးနှေးဘဲ၊ နစေ့ဉျကငျြလညျနရေတဲ့ နိစ်စဓူဝဖွဈရပျတှထေဲကတဆငျ့ သိမွငျနိုငျပါတယျ။ဒီဘဝသကျတမျးမကုနျသရှေ့ နနေ့ညေ့ည ဘဝယန်တယားကွီးထဲ ကငျြလညျကွရပါတယျ။မနကျလငျးခြိနျ အိပျရာကထကွရတယျ။ကိုယျလကျသုတျသငျကွရတယျ။မနကျစာ စားကွရတယျ။ကြောငျးသားအရှယျက ကြောငျးသှား၊ အလုပျလုပျရတဲ့အရှယျက အလုပျသှား၊ သိပျငယျရှယျတဲ့လေးတှနေဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှကေ အိမျမှာနကွေရပါတယျ။မနကျစာခြိနျရောကျတော့ မနကျစာစားကွရ၊ ညစာခြိနျရောကျတော့ ညစာစားကွရ။စားသောကျထားတဲ့ အစာတှကေတဆငျ့ အညဈအကွေးတှစှေနျ့ကွရ စတဲ့ ခန်ဓာဝနျကို ဘဝစရလာခြိနျကနေ သဆေုံးခြိနျထိ လုပျဆောငျကွရပါတယျ။လူသားတှရေဲ့ ဒီလိုပုံမှနျဆောငျရှကျရမွဲလုပျငနျးစဉျကို ငွီးငှလေ့ာရငျ ခဏရုနျးထှကျကွပါတယျ။အဲဒီအခါ ကိုယျ-စိတျ အပနျးဖွစေရာ၊ တေးဂီတ၊ ရုပျရှငျ၊ သဘငျ၊ အားကစား၊ အရကျ၊ မူးယဈဆေး စတာတှရှေိသလို၊ ကိုးကှယျယုံကွညျရာ ဘာသာတရားအဆုံးအမတှလေဲ ရှိကွပါတယျ။
အနုပညာ၊ အားကစား၊ ဘာသာရေး စတဲ့ နယျပယျတဈခုခုမှာ နာမညျကောငျးနဲ့ဖွဈဖွဈ၊ နာမညျဆိုးနဲ့ဖွဈဖွဈ ထငျရှားသူတှကေို လူအမြားကသိကွပမေဲ့ အဲဒီလိုထငျရှားကြျောကွားသူတှကေ လူတိုငျးကိုမသိနိုငျကွပါဘူး။နစေ့ဉျ လူတှေ မှေးလာကွ၊ သသှေားကွတာ ဘာမှမဆနျးတဲ့ လောကဖွဈစဉျပါ။ဒါပမေဲ့ ထငျရှားသူတဈယောကျယောကျ သပွေီဆိုရငျတော့ ကမ်ဘာ့လူထုကွားမှာ အခိုကျအတနျ့လှုပျရှားသှားတတျပါတယျ။အမရေိကနျသမ်မတ ဂြှနျအကျဖျကနဒေီ လုပျကွံခံရတဲ့ဖွဈရပျ၊ အိန်ဒိယနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ အငျဒီယာဂန်ဒီ လုပျကွံခံရတဲ့ဖွဈရပျ စတာတှကေ ကမ်ဘာကိုဂယကျရိုကျခတျ တုနျလှုပျစခေဲ့ပါတယျ။အဲဗဈပရကျစလေ၊ မိုကျကယျဂကျြဆငျတို့ သတေုနျးက၊ မာရီလငျမှနျရိုး သတေုနျးက၊ ဘရုဈစလီ သတေုနျးက သူတို့ရဲ့ ကမ်ဘာ့ပရိသတျကွား တုနျလှုပျခွောကျခွားခဲ့ကွပါတယျ။မွနျမာမှာတော့ ကမ်ဘာကတုနျလှုပျရတဲ့ နာမညျကြျောဆိုလို့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတဈယောကျသာ အမှတျထငျထငျရှိခဲ့ပါတယျ။ဗိုလျခြုပျတို့လုပျကွံခံရတဲ့သတငျးက ကမ်ဘာကိုတုနျလှုပျစခေဲ့ပါတယျ။ဗိုလျခြုပျကိုဆုံးရှုံးရတာဟာ မွနျမာနိုငျငံတဈခုထဲမဟုတျဘူး၊ အာရှတိုကျအတှကျပါ ဆုံးရှုံးရတာပါလို့ အိန်ဒိယနိုငျငံခေါငျးဆောငျ နရေူး အပါအဝငျ ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျတှကေ နှမွောဝမျးနညျးခဲ့ကွပါတယျ။
ကြျောကွားသူ မွနျမာအမြားစုဟာ ပွညျတှငျးမှာပဲ ကြျောကွားကွတာမြားပါတယျ။ကမ်ဘာကို ထိုးထှငျးဖောကျနိုငျတဲ့အထိ ကြျောကွားတဲ့မွနျမာ နညျးပါးလှပါတယျ။သူ့အရပျနဲ့သူ့ဇာတျဆိုသလို စှယျစုံရမငျးသားကွီး ဝငျးဦး သတေုနျးက သူ့ပရိသတျတှကွေားမှာ နှမွောဝမျးနညျးသံတှေ ဆူညံသှားပါတယျ။သူအသကျရှငျနထေိုငျစဉျက လုပျဆောငျခဲ့တာတှကေို အမှတျတရပွနျပွောငျးပွောကွ ရေးကွပါတယျ။ကနျြခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျး ၁၁.၇.၂၀၂၀ ရကျနမှေ့ာ ဦးကိတ်တိသာရ ဘှဲ့အမညျနဲ့ ရဟနျးဝတျနတေဲ့ တခြိနျက စှယျစုံရအနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ ကြျောဟိနျး ပြံလှနျတျောမူသှားပါတယျ။ရုပျရှငျလောကသားတှနေဲ့ ကြျောဟိနျးပရိသတျတှေ ဝမျးနညျးတုနျလှုပျသှားကွပါတယျ။ ၂၀ ရာစု မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကမှာ စှယျစုံတျောခဲ့သူတှအေဖွဈ ဝငျးဦးနဲ့ ကြျောဟိနျးတို့နှဈယောကျ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ ကြျောကွားလာကွပါတယျ။
မငျးသားကွီးဝငျးဦးဟာ ရုပျရှငျ၊ စာပနေဲ့ ဂီတလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျနတေုနျးမှာပဲ အူမကွီးကငျဆာဝဒေနာကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ရပါတယျ။သူ့ကို အရူးအမူးကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ ပရိသတျတှရေော၊ သူ့ကို ဝဖေနျအပွဈတငျခဲ့သူတှရေော တညီတညှတျလကျခံကွရတာက သူဟာ လူတျောတဈယောကျ စှယျစုံရအနုပညာရှငျတယောကျဆိုတာပါပဲ။ ၁၉၉၉ အကုနျ ၂၀၀၀ နှဈသဈကူးပွောငျးခြိနျကို မကျြဝါးထငျထငျစောငျ့ကွညျ့ခငျြလို့ ပွငျးပွငျးပွပွပွောခဲ့တဲ့ ဦးဝငျးဦးရဲ့ဆန်ဒ မပွညျ့ဝသှားခဲပါဘူး။ဒီအတှကျ သူ့အသိမိတျဆှတှေကေ ဝမျးနညျးကွကှေဲကွပါတယျ။ဦးဝငျးဦး ရောဂါဝဒေနာခံစားနရေခြိနျတုနျးက အခုခတျေလို ပွညျတှငျးမှာ အထူးကုဆေးရုံတှမေရှိသေးပါဘူး။ပွငျပ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံဆိုတာ လကျခြိုးရလေို့ရတဲ့ကာလပါ။ဦးဝငျးဦးဟာ အင်ျဂလနျကိုသှားပွီးဆေးကုလိုကျ ပွနျလာရငျ မွရတနာဆေးတိုကျမှာ တကျရောကျကုသမှုခံယူလိုကျ လုပျနရေပါပွီ။သူ့ပရိသတျတခြို့က မွရတနာဆေးရုံကိုသှားပွီး သူ့အခွအေနကေိုကွညျ့ကွပါတယျ။ဝငျးဦးရယျလို့ ထငျးနတေဲ့နှာတနျနဲ့ မေးစပေ့ျေါကမှဲ့ကိုသာမမွငျရရငျ ဒါ ဝငျးဦးမဟုတျဘူးလို့ ပွောမိမှာပဲတဲ့။ဆိုလိုတာကတော့ တခြိနျက အငျမတနျကွညျ့ကောငျးတဲ့ ဝငျးဦးရဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျတှမေရှိတော့ဘူး။ဒါ့အပွငျ အတညျမပွုနိုငျတဲ့ ကောလာဟလတဈမြိုးလဲ ထှကျလာခဲ့ပါသေးတယျ။ဦးဝငျးဦးဟာ မွရတနာဆေးရုံပျေါမှာ ပကျလကျအနအေထားနဲ့ပဲ ပါးစပျက ကပျ ကပျလို့ပွောပွီး ရုပျရှငျရိုကျနတေတျတယျဆိုတာပါပဲ။ဒီသတငျးသာမှနျရငျ သူလုပျနတေဲ့ ဂီတ၊ စာပနေဲ့ ရုပျရှငျမှာ ဦးဝငျးဦး အစှဲလနျးဆုံးက ရုပျရှငျပဲပေါ့။အသကျ ၅၃ နှဈကြျော ၅၄ နှဈထဲအဝငျမှာ ဦးဝငျးဦး ဆုံးပါးခဲ့ပါတယျ။ရုပျရှငျကိုတှယျတာလှနျးတဲ့ မငျးသားကွီး ဝငျးဦးတဈယောကျ လူ့လောကထဲကထှကျခှာသှားရခြိနျမှာ သူအမွတျတနိုးလုပျခဲ့တဲ့ စာပေ၊ ဂီတနဲ့ရုပျရှငျကို ထားခဲ့ရပါပွီ။
ဝငျဦးခတျေပွီးတော့ ကြျောဟိနျးခတျေဖွဈလာပါတယျ။ရုပျရှငျနယျပယျမှာ စှယျစုံရမငျးသားအဖွဈ ကြျောဟိနျး ကြျောကွားလာပါတယျ။ဝငျးဦး ပျေါခါစတုနျးက ဘောငျးဘီဖငျကပျြဝတျတယျ၊ အမောကျထောငျတယျဆိုပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျဝဖေနျခဲ့သူတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ကြျောဟိနျးကို လူကွိုကျမြားလာတော့လဲ ဖငျကိုတှနျ့လိမျတှနျ့လိမျ လုပျပွီးလုပျပွီးလမျးလြှောကျတာ လိမျတှနျ့ကောကျကှေးပွီး သီခငျြးဆိုတာ ဆံပငျဂုတျထောကျထားတာတှကွေောငျ့ လမျးသရဲမငျးသားဆိုပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျဝဖေနျသူတှေ၊ လကျမခံသူတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကြျောဟိနျးဟာ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာနဲ့ တေးသံရှငျတဈယောကျအဖွဈ အောငျမွငျကြျောကွားလာပါတယျ။စာလဲရေးပမေဲ့ စာရေးဆရာအဖွဈ ဝငျးဦးလို လူသိမမြားခဲ့ပါဘူး။ဝငျးဦးလောကျလဲ စာမရေးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ကြျောဟိနျး အရှိနျအဟုနျနဲ့အောငျမွငျနတေုနျးမှာပဲ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈမှာ ကြျောဟိနျးရဲ့ ကွညောခကျြတဈခုထှကျလာပါတယျ။အဲဒါကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ လုပျလကျစအနုပညာလုပျငနျးအားလုံးကို စှနျ့ခှာတော့မယျတဲ့။
ဒီကွညောခကျြအပျေါ ကြျောဟိနျးတဈယောကျ စတနျ့ထှငျပွနျပွီလို့ ယူဆသူမြားပွားပွီး ယုံကွညျသူနညျးပါးခဲ့ပါတယျ။လကျတှကေ့ကြစြဉျးစားရငျလဲ ရုပျရှငျနဲ့ ဂီတမှာ ကြျောဟိနျးထကျ ပိုကြျောကွားသူ မပျေါပေါကျသေးဘူး။ဝငျငှကေောငျးတဲ့ မငျးသားဖွဈတဲ့အပွငျ အိမျထောငျနဲ့ သားသမီးတှကေရှိသေးတယျ။ဒီကွိုးတှကေိုဖွတျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျဘူး၊ မလှယျဘူးလို့ အမြားကယူဆကွတာပါ။ကြျောဟိနျးကတော့ ၂၀၀၈ နိုဝငျဘာ ၅ ရကျနမှေ့ာ တကယျပဲ လုပျလကျစလုပျငနျးအားလုံးကို စှနျ့ခှာခဲ့ပါတယျ။နောကျတော့ ကြျောဟိနျး ဘုနျးကွီးဝတျသှားပွီဆိုတဲ့ သတငျးထှကျလာပါတော့တယျ။ဒါတောငျ ဘယျအခြိနျ လူဝတျပွနျလဲပွီး ရုပျရှငျပွနျရိုကျလမေလဲလို့ တှေးသူမြားရှိခဲ့ပါတယျ။
နောကျတော့ ကြျောဟိနျးလှူတဲ့ ဘုရားဆိုပွီး သတငျးထှကျလာပွနျပါတယျ။ဗိုလျတဈထောငျဘုရားမှာ ကြျောဟိနျးဘုရားရှိတယျလို့ အရပျပွောပွောလာကွပါတယျ။နောကျတော့ ကြျောဟိနျး တရားတှလှေညျ့ဟောနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးထှကျလာပွနျပါတယျ။ကြျောဟိနျး ကို တရားမဟောဖို့ တခြို့ဆရာတျောတှကေ တားမွဈတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှလေဲထှကျလာပါတယျ။အဲဒီအခြိနျထိ ဦးကိတ်တိသာရလို့ သတငျးထှကျမလာဘဲ ကြျောဟိနျးလို့သာ သတငျးကထှကျထှကျလာတတျပါတယျ။အဲဒီနောကျပိုငျး ကြျောဟိနျးသတငျး တိမျမွှုပျသှားပါတယျ။အတျောကွာမှ ကြျောဟိနျး လဖွေတျသှားတယျ။သမီးတှရှေိတဲ့ အျောစီမှာ သီတငျးသုံးနတေယျ စတဲ့သတငျးတှထှေကျလာပါတယျ။
ဇူလိုငျ ၁၁ ရကျနေ့ မနကျ ၉ နာရီကြျောအခြိနျမှာ ဦးကိတ်တိသာရ (ကြျောဟိနျး) ပြံလှနျသှားပွီဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ဖစျေ့ဘုတျပျေါတကျလာပါတယျ။ဖစျေ့ဘုတျပျေါတကျလာတဲ့ ဦးကိတ်တိသာရ အငျတာဗြူးတှနေဲ့ ဟောပွောခကျြကို နားထောငျကွညျ့မှ ဦးကိတ်တိသာရ လောကီသားဘဝတုနျးကလဲ လောကီအလုပျကို ပီပီပွငျပွငျလုပျသှားတယျ။ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတဈယောကျအနနေဲ့ လောကုတ်တရာတရား အားထုတျပွီဆိုတော့လဲ၊ ဗုဒ်ဓတရားတျောရဲ့ အနှဈသာရကို သသေခြောခြာ နားလညျတဲ့အထိလလေ့ာပွီး ထိထိရောကျရောကျ ကငျြ့ကွံအားထုတျသှားတယျဆိုတာကို ထငျးထငျးကွီးတှလေို့ကျရပါတယျ။အျော - လောကကိုအနိုငျနဲ့ပိုငျး ထှကျခှာသှားသူပါတကား။
ဇူလိုငျ - ၂၂
“ဘယ်ကလာတာလဲ ? - မသိပါဘုရား။ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ ? - မသိပါဘုရား” ဆိုတဲ့ အမေး-အဖြေလေး ၂ ခုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် တိုတောင်းတဲ့သတိပေးမှုလေးပါ။လူ့ဘဝကိုရလာကြတယ်။ဒီဘဝကို ဘယ်လိုရလာသလဲ။မိဖကမွေးလို့ ရလာတယ်လို့ ဖြေကြရုံကလွဲလို့ တိတိကျကျမဖြေနိုင်ကြပါဘူး။တနေ့နေ့မှာ ကျိန်းသေ သေရမယ်ဆိုတာ ဘဝကိုရလာသူတိုင်းသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သေပြီးရင် ဘယ်ကိုရောက်သွားမှာလဲ၊ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ဘယ်သူမှမသိပါ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဒကာမတစ်ယောက်ကို ပရိသတ်အလယ်မှာ ဒီသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖော်ပြပါ မေးခွန်း ၂ ခု မေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘဝကိုရလာသူမှန်သမျှ ဆင်းရဲ-ချမ်းသာ၊ အရုပ်ဆိုး-လှပသူ၊ ပညာတတ်-ပညာမဲ့၊ ရာထူးရှိ-ရာထူးမဲ့၊ ဂုဏ်ရှိ-ဂုဏ်မဲ့ ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုရထားကြပါစေ၊ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် အလွန်တွယ်တာခုံမင်ကြတာ ပုထုဇဉ်သဘာဝပါ။မွေးလာသူတိုင်း တနေ့သေမယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
ကိုယ့်ရှေ့မှာပဲ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူ၊ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူ၊ ကိုယ့်ထက်ငယ်သူတွေ သေသွားကြတာကို လူတိုင်းကြုံဖူးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အံ့ဩဖို့ကောင်းတာက ဒီလိုသေခြင်းတရားကို တွေ့ရချိန်မှာတောင် လူအများစုမှာ “ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြင့် သေရှာပြီ၊ ငါတော့နေရအုံးမှာပါ မသေသေးပါဘူး” စိတ်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဘဝကိုတွယ်တာပေမဲ့ ဘဝဟာ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့သာပြည့်နေတာပါကလားလို့ သတိကပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး သံသရာမလည်ချင်သူ အနည်းအကျဉ်းလဲရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အလွန်နည်းပါတယ်။
တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ နေ့စဉ် စက္ကန့်မလပ် လူတွေမွေးလာကြသလို၊ စက္ကန့်မလပ် လူတွေသေနေကြပါတယ်။ဒီ ဖွား-သေ ယန္တယားကြီး မှန်မှန်လည်ပတ်နေတာကို ရပ်တန့်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်လို့ ညွှန်ပြတဲ့အဆုံးအမကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တနေ့ သေခါမှသေရော၊ ဘဝမှာနေရသခိုက် ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ညစ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် ပျော်မွေ့ကြတာ လူ့သဘာဝပါ။ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင် သံသရာ (စဉ်ဆက်မပြတ် တရစပ်ဖြစ်ခြင်း) ဆိုတာ ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်ဖြစ်နေတာကိုမဆွေးနွေးဘဲ၊ နေ့စဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့ နိစ္စဓူဝဖြစ်ရပ်တွေထဲကတဆင့် သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဘဝသက်တမ်းမကုန်သရွေ့ နေ့နေ့ညည ဘဝယန္တယားကြီးထဲ ကျင်လည်ကြရပါတယ်။မနက်လင်းချိန် အိပ်ရာကထကြရတယ်။ကိုယ်လက်သုတ်သင်ကြရတယ်။မနက်စာ စားကြရတယ်။ကျောင်းသားအရွယ်က ကျောင်းသွား၊ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အရွယ်က အလုပ်သွား၊ သိပ်ငယ်ရွယ်တဲ့လေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက အိမ်မှာနေကြရပါတယ်။မနက်စာချိန်ရောက်တော့ မနက်စာစားကြရ၊ ညစာချိန်ရောက်တော့ ညစာစားကြရ။စားသောက်ထားတဲ့ အစာတွေကတဆင့် အညစ်အကြေးတွေစွန့်ကြရ စတဲ့ ခန္ဓာဝန်ကို ဘဝစရလာချိန်ကနေ သေဆုံးချိန်ထိ လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။လူသားတွေရဲ့ ဒီလိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရမြဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို ငြီးငွေ့လာရင် ခဏရုန်းထွက်ကြပါတယ်။အဲဒီအခါ ကိုယ်-စိတ် အပန်းဖြေစရာ၊ တေးဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ အားကစား၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေး စတာတွေရှိသလို၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေလဲ ရှိကြပါတယ်။
အနုပညာ၊ အားကစား၊ ဘာသာရေး စတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုခုမှာ နာမည်ကောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ နာမည်ဆိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ထင်ရှားသူတွေကို လူအများကသိကြပေမဲ့ အဲဒီလိုထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေက လူတိုင်းကိုမသိနိုင်ကြပါဘူး။နေ့စဉ် လူတွေ မွေးလာကြ၊ သေသွားကြတာ ဘာမှမဆန်းတဲ့ လောကဖြစ်စဉ်ပါ။ဒါပေမဲ့ ထင်ရှားသူတစ်ယောက်ယောက် သေပြီဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့လူထုကြားမှာ အခိုက်အတန့်လှုပ်ရှားသွားတတ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ လုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် အင်ဒီယာဂန္ဒီ လုပ်ကြံခံရတဲ့ဖြစ်ရပ် စတာတွေက ကမ္ဘာကိုဂယက်ရိုက်ခတ် တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဗစ်ပရက်စလေ၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့ သေတုန်းက၊ မာရီလင်မွန်ရိုး သေတုန်းက၊ ဘရုစ်စလီ သေတုန်းက သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ပရိသတ်ကြား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာမှာတော့ ကမ္ဘာကတုန်လှုပ်ရတဲ့ နာမည်ကျော်ဆိုလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတစ်ယောက်သာ အမှတ်ထင်ထင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်တို့လုပ်ကြံခံရတဲ့သတင်းက ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကိုဆုံးရှုံးရတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘူး၊ အာရှတိုက်အတွက်ပါ ဆုံးရှုံးရတာပါလို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းဆောင် နေရူး အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက နှမြောဝမ်းနည်းခဲ့ကြပါတယ်။
ကျော်ကြားသူ မြန်မာအများစုဟာ ပြည်တွင်းမှာပဲ ကျော်ကြားကြတာများပါတယ်။ကမ္ဘာကို ထိုးထွင်းဖောက်နိုင်တဲ့အထိ ကျော်ကြားတဲ့မြန်မာ နည်းပါးလှပါတယ်။သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇာတ်ဆိုသလို စွယ်စုံရမင်းသားကြီး ဝင်းဦး သေတုန်းက သူ့ပရိသတ်တွေကြားမှာ နှမြောဝမ်းနည်းသံတွေ ဆူညံသွားပါတယ်။သူအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကို အမှတ်တရပြန်ပြောင်းပြောကြ ရေးကြပါတယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ၁၁.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာ ဦးကိတ္တိသာရ ဘွဲ့အမည်နဲ့ ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ တချိန်က စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျော်ဟိန်း ပျံလွန်တော်မူသွားပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ ကျော်ဟိန်းပရိသတ်တွေ ဝမ်းနည်းတုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။ ၂၀ ရာစု မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ စွယ်စုံတော်ခဲ့သူတွေအဖြစ် ဝင်းဦးနဲ့ ကျော်ဟိန်းတို့နှစ်ယောက် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ကျော်ကြားလာကြပါတယ်။
မင်းသားကြီးဝင်းဦးဟာ ရုပ်ရှင်၊ စာပေနဲ့ ဂီတလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတုန်းမှာပဲ အူမကြီးကင်ဆာဝေဒနာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ကို အရူးအမူးကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရော၊ သူ့ကို ဝေဖန်အပြစ်တင်ခဲ့သူတွေရော တညီတညွှတ်လက်ခံကြရတာက သူဟာ လူတော်တစ်ယောက် စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တယောက်ဆိုတာပါပဲ။ ၁၉၉၉ အကုန် ၂၀၀၀ နှစ်သစ်ကူးပြောင်းချိန်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်စောင့်ကြည့်ချင်လို့ ပြင်းပြင်းပြပြပြောခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းဦးရဲ့ဆန္ဒ မပြည့်ဝသွားခဲပါဘူး။ဒီအတွက် သူ့အသိမိတ်ဆွေတွေက ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြပါတယ်။ဦးဝင်းဦး ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရချိန်တုန်းက အခုခေတ်လို ပြည်တွင်းမှာ အထူးကုဆေးရုံတွေမရှိသေးပါဘူး။ပြင်ပ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ကာလပါ။ဦးဝင်းဦးဟာ အင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးဆေးကုလိုက် ပြန်လာရင် မြရတနာဆေးတိုက်မှာ တက်ရောက်ကုသမှုခံယူလိုက် လုပ်နေရပါပြီ။သူ့ပရိသတ်တချို့က မြရတနာဆေးရုံကိုသွားပြီး သူ့အခြေအနေကိုကြည့်ကြပါတယ်။ဝင်းဦးရယ်လို့ ထင်းနေတဲ့နှာတန်နဲ့ မေးစေ့ပေါ်ကမှဲ့ကိုသာမမြင်ရရင် ဒါ ဝင်းဦးမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမိမှာပဲတဲ့။ဆိုလိုတာကတော့ တချိန်က အင်မတန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဝင်းဦးရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်တွေမရှိတော့ဘူး။ဒါ့အပြင် အတည်မပြုနိုင်တဲ့ ကောလာဟလတစ်မျိုးလဲ ထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဦးဝင်းဦးဟာ မြရတနာဆေးရုံပေါ်မှာ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ပဲ ပါးစပ်က ကပ် ကပ်လို့ပြောပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီသတင်းသာမှန်ရင် သူလုပ်နေတဲ့ ဂီတ၊ စာပေနဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ ဦးဝင်းဦး အစွဲလန်းဆုံးက ရုပ်ရှင်ပဲပေါ့။အသက် ၅၃ နှစ်ကျော် ၅၄ နှစ်ထဲအဝင်မှာ ဦးဝင်းဦး ဆုံးပါးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကိုတွယ်တာလွန်းတဲ့ မင်းသားကြီး ဝင်းဦးတစ်ယောက် လူ့လောကထဲကထွက်ခွာသွားရချိန်မှာ သူအမြတ်တနိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ စာပေ၊ ဂီတနဲ့ရုပ်ရှင်ကို ထားခဲ့ရပါပြီ။
ဝင်ဦးခေတ်ပြီးတော့ ကျော်ဟိန်းခေတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာ စွယ်စုံရမင်းသားအဖြစ် ကျော်ဟိန်း ကျော်ကြားလာပါတယ်။ဝင်းဦး ပေါ်ခါစတုန်းက ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်ဝတ်တယ်၊ အမောက်ထောင်တယ်ဆိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့သူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျော်ဟိန်းကို လူကြိုက်များလာတော့လဲ ဖင်ကိုတွန့်လိမ်တွန့်လိမ် လုပ်ပြီးလုပ်ပြီးလမ်းလျှောက်တာ လိမ်တွန့်ကောက်ကွေးပြီး သီချင်းဆိုတာ ဆံပင်ဂုတ်ထောက်ထားတာတွေကြောင့် လမ်းသရဲမင်းသားဆိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်သူတွေ၊ လက်မခံသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျော်ဟိန်းဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာနဲ့ တေးသံရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်ကျော်ကြားလာပါတယ်။စာလဲရေးပေမဲ့ စာရေးဆရာအဖြစ် ဝင်းဦးလို လူသိမများခဲ့ပါဘူး။ဝင်းဦးလောက်လဲ စာမရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျော်ဟိန်း အရှိန်အဟုန်နဲ့အောင်မြင်နေတုန်းမှာပဲ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျော်ဟိန်းရဲ့ ကြေညာချက်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ လုပ်လက်စအနုပညာလုပ်ငန်းအားလုံးကို စွန့်ခွာတော့မယ်တဲ့။
ဒီကြေညာချက်အပေါ် ကျော်ဟိန်းတစ်ယောက် စတန့်ထွင်ပြန်ပြီလို့ ယူဆသူများပြားပြီး ယုံကြည်သူနည်းပါးခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားရင်လဲ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတမှာ ကျော်ဟိန်းထက် ပိုကျော်ကြားသူ မပေါ်ပေါက်သေးဘူး။ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ မင်းသားဖြစ်တဲ့အပြင် အိမ်ထောင်နဲ့ သားသမီးတွေကရှိသေးတယ်။ဒီကြိုးတွေကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မလွယ်ဘူးလို့ အများကယူဆကြတာပါ။ကျော်ဟိန်းကတော့ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ တကယ်ပဲ လုပ်လက်စလုပ်ငန်းအားလုံးကို စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ ကျော်ဟိန်း ဘုန်းကြီးဝတ်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာပါတော့တယ်။ဒါတောင် ဘယ်အချိန် လူဝတ်ပြန်လဲပြီး ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်လေမလဲလို့ တွေးသူများရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ ကျော်ဟိန်းလှူတဲ့ ဘုရားဆိုပြီး သတင်းထွက်လာပြန်ပါတယ်။ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားမှာ ကျော်ဟိန်းဘုရားရှိတယ်လို့ အရပ်ပြောပြောလာကြပါတယ်။နောက်တော့ ကျော်ဟိန်း တရားတွေလှည့်ဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာပြန်ပါတယ်။ကျော်ဟိန်း ကို တရားမဟောဖို့ တချို့ဆရာတော်တွေက တားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလဲထွက်လာပါတယ်။အဲဒီအချိန်ထိ ဦးကိတ္တိသာရလို့ သတင်းထွက်မလာဘဲ ကျော်ဟိန်းလို့သာ သတင်းကထွက်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျော်ဟိန်းသတင်း တိမ်မြှုပ်သွားပါတယ်။အတော်ကြာမှ ကျော်ဟိန်း လေဖြတ်သွားတယ်။သမီးတွေရှိတဲ့ အော်စီမှာ သီတင်းသုံးနေတယ် စတဲ့သတင်းတွေထွက်လာပါတယ်။
ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီကျော်အချိန်မှာ ဦးကိတ္တိသာရ (ကျော်ဟိန်း) ပျံလွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက်လာပါတယ်။ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက်လာတဲ့ ဦးကိတ္တိသာရ အင်တာဗျူးတွေနဲ့ ဟောပြောချက်ကို နားထောင်ကြည့်မှ ဦးကိတ္တိသာရ လောကီသားဘဝတုန်းကလဲ လောကီအလုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်လုပ်သွားတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လောကုတ္တရာတရား အားထုတ်ပြီဆိုတော့လဲ၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ အနှစ်သာရကို သေသေချာချာ နားလည်တဲ့အထိလေ့လာပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်သွားတယ်ဆိုတာကို ထင်းထင်းကြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အော် - လောကကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်း ထွက်ခွာသွားသူပါတကား။
ဇူလိုင် - ၂၂